Mitontona amin’ny fotoana mahamety azy ny zava-drehetra – Blaogin'i Voniary
Tandra vadin-koditry ny fiainanany olana ary indraindray mila ho kivy mihitsy ny tena fa toa tsy misy mandeha amin’ny laoniny izay kasaina. Raha tsikaritrao anefa, toa tsy hitahita akory dia miravona ny olana, toa milamina ho azy eny ihany ny zava-drehetra rehefa tongailay fotoana. Fantaro ary fa zava-poana ny ahiahy fa ny tokony hataonao dia nymiasa araka izay tratry ny herinao, avy eo matoky ilay Andriamanitra mpahary anao.
Tsy ilaina ny miahiahy
Izao no ataovy ao an-tsainao voalohany : Amin’Andriamanitra mpahary, tsy misy taraiky, tsy misy lasa aloha fa « ny zavatra rehetra samy nataon’Andriamanitra ho tsara amin’ny fotoany avy» hoy ny Mpitoriteny ao amin’ny toko fahatelo, andininy faha-11. Noho izany, raha matoky ilay mpahary anao ianao dia tsy tokony iahiahy mihitsy. Aleo ho anjaran’ny tsy mpino ny miahiahy fa tsy anjaranao satria na iahiahy aza ianao tsy ho voasahanao avokoa ny zava-drehetra.
Misy karazany telo ny olana eo amin’ny fiainana araka ny fanasokajian’i Stephen Covey azy, fa ireto roa ireto ihany aloha no mahakasika ny resaka. Voalohany, misy ireo zavatra ananao fahefana feno ny manova azy ohatra ny fahazaranao sy ny toetranao. Faharoa, misy kosa ny zavatra ananao fahefana saingy miankina amin’ny an’olona hafa. Iny indrindra no mila hanana faharetana satria tsy ho vitanao irery avokoa ny asa rehetra ary ny olona tsy mitovy toetra aminao. Noho izany, ireo zavatra ananao fahefana hanova azy no tanteraho voalohany araka izay vitanao dia ankino amin’Andriamanitra ny sisa.
Miasà dia matokia
Eny, tsy ilaina ny miahiahy fa izany akory tsy midika hoe natao hipetraka fotsiny ny olombelona. Tsy hoe matory eo am-pandriana ianao dia tonga ny ariary zato. Nomen’Andriamanitra vatana, saina sy fanahy ianao, ireo no maha-anao anao ka ampiasao ireo araka izay tratranao. Indro toe-javatra iray niainako, zaraiko aminao ary mino aho fa efa niaina zavatra tahaka izany koa ianao e !
Misy olona izay, niriko nanaovana antsafa ho an’ny Blaogin’i Voniary fa tsy nety tanteraka mihitsy noho ny tsy fifanandrifiam-potoana. Ilay olona koa moa be ierehana izay ihany. Efa saika kivy mihitsy aho fa notazomiko tao an’eritreritro tao foana anefa ilay faniriko ary natsidiko tamin’ilay olona teny foana ilay resaka. Ary nisy fotoana aza, teo am-panomanana famelabelaran-kevitra tany amin’ny toerana iray izy no natoniko, saingy toa tsy nety koa iny tetiko iny. Efa saika nilavo lefona aho hoe aleo hadaboka any rehefa tsy mazoto izy. Nanandrana niantso farany aho tapa-bolana taty aoriana. Akory ny hatairako fa nanaiky izy ary tonga dia hoy izy hoe « aleo amin’ny sabotsy ary e! » Notanterahina ary ny antsafa, nahafinaritra ery ! Fa ny tena nahagaga ahy avy eo, kay efa antomotra ny 8 martsa, tsara fitontona izany ilay lahatsoratra satria mikasika vehivavy iray mandray andraikitra eo amin’ny fiarahamonina. Roa taona taty aoriana vao tanteraka io antsafa io, nitontona tamin’ny fotoana mahamety azy ary nandraisako lesom-piainana goavana.
Misy lamina tsy takatry ny sainao any ambadika any.
Nikarakara raharaha izahay vao tsy ela izay. Efa nilamindamina avokoa ny zava-drehetra fa izay mofomamy hohanina amin’ilay andro lehibe no mbola tsisy tokotaniny. Efa nanandrana mofomamy tamina mpivarotra voafantina ihany izahay, saingy tsy nisy naharesy lahatra anay avokoa : ny sasany lafo loatra, ny sasany tsy dia ao ny tsirony, ny an’ny sasany aza moa ilay mpanao mofo mihitsy no tsy teto an-toerana. Dia nandeha teny ihany ny fotoana. Efa ho herinandro tsy ahatongavan’ilay andro volamena, mbola tsy hita ihany izay mofomamy ! Tao anatin’ny rotoroton’ny fikarakarana anefa dia nahatsiaro reraka aho ka ofomamy no mba tsarotsaroan’ny vavako. Nividy tao amin’ny mpivarotra iray izay tsy dia lavitra anay loatra ary izahay. Rehefa avy nihinana dia gaga fa nafilotra ery ity izy ary azo ekena tsara ny vidiny, mora noho ny tetibola nomanina aza. Dia tao no nampanaovina ny mofomamy, efa efarana mialoha ny raharaha, saingy tena nafilotra tokoa ary nety taminay.
Iny zavatra iray niainako iny no anisany mahatonga ahy hino hoe misy milina mihodina any ambadika any, misy fifampikasohan’olona, vintana sy anjara, araka ny lahatr’Andriamanitra izay tsy takatry ny sainao mihitsy fa rehefa mipoaka ilay izy eo ianao vao faly sy ravo midera ny FITONDRANY ianao.
Fehin’izany rehetra izany, misy fandaharana efa matipaika momba anao, misy milina miodina any ambadika any ka mampilamina ny zava-drehetra fa ny anjaranao dia mampiasa izay talentanao araka ny tratranao avy eo matokia ilay Mpahary anao, MATOKIA AZY.
développement personnel gasy, empowerment gasy, faharetana, fotoana, stephen covey
5 commentaires sur “Mitontona amin’ny fotoana mahamety azy ny zava-drehetra”
Nous sommes très fiers d’avoir reçu votre nomination aux BOMBS de 2019 par un de vos lecteurs dans la Catégorie « Teny Gasy ».
Je tiens personnellement à vous remercier pour avoir maintenu ce blog et poursuivi l’écriture d’articles dans notre langue afin de promouvoir plus amplement notre culture dans le monde digital. Les lecteurs (comme moi) qui sont hésitants à rédiger en Malagasy sont d’autant plus encouragés car le contenu et les thématiques que vous abordez sont très contemporains et nous parlent à tous.
Tena marina izany! tsy mety ny very toky, fa ny manantena sy mandroso no mety, ny hakiviana tsy vahaolana, ny miharina no tsara indrindra! misaotra o
Izany tokoa no atao hoe toe-tsaina mpandresy! Mankasitraka ny mpamaky!
Faly mizara rakitra nataoko momba ny « Développement personnel » :
Misaotra amin’ny fizarana e!